पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रका डायनामिक हिरो, सबैका बलराम
प्रकाशित मिति: 2019/05/06
बैशाख २३, काठमाण्डौ । बलराम न्यौपाने पर्यटन क्षेत्रमा बहुआयामिक व्यक्तित्वको रुपमा परिचित छन । २०१८ सालमा रसुवा जिल्लाको जिपजिपे मानेस्वारा कालिका गाउँपालिका वडा न. ५ मा जन्मिएका हुन, न्यौपाने ।
कक्षा ४ मा पढ्दै गर्दा गाँउकै साथीसँगको सल्लाहमा पहिलो चोटी घर छोडेर पोखरा पुगेको थिएँ । संघर्ष त्यही बाट सुरु भयो भन्ने लाग्छ । गोजीमा दुईचार रुपैयाँ पैसा त थियो तर केही खरिद गर्ने बित्तिकै गोजी रित्तो हुन्थ्यो ।
दुई दिन भोकै बस्यौ, तेस्रो दिन मुखमा पानि हालेर छोटेपाटनको रोडमा बरालिदै गर्दा एक हुल व्यक्ति बाटोको बिचमा केके जाति गर्दै थिए ।
(साथी)उसले भन्यो, उ त्यो मोटे व्यक्तिलाई भनेर हामी पनि नाली खन्ने हो की ?
नुवाकोटकै तामाङ थरका व्यक्तिले बाटो खन्ने जिम्मा लिएका रहेछन, हामीलाई पनि काममा राख्न राजी भएँ । खुसीको सिमा थिएन । बेलुका बस्ने र खानेको टुंगो लाग्यो । बस पुग्यो । अरु चाहिएको थिएन । त्यसमाथी १५ दिनमा तलब दिने कुरा गरेका थिए । उसिना चामलको ड्रममा पकाएको भात, ८०, सय जना हुँदा हुन भात खाने व्याक्तिहरु । व्यस्त दैनिकी, घरको जस्तो भएन भनेर सोच्ने छुट त कहाँ थियो र त्यैपनि बेस्वादको खाना र निरस कामले टिकाईरहन सकेन, त्यसमाथि १५ दिनमा दिने भनेको तलब दुई महिनामा पनि दिएनन । जुनठाँउमा थियौ, त्यही पुग्यौ । अर्थात दिनभरी काम खोज्ने काम र बेलुकी भएपछि पाटीको बास ।
रसुवा ट्रेक बाट उनले बाटो, पुलपुलेसा र शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिएकै छन ।
एकबर्ष अगाडि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले समेत उनलाई रसुवा नुवाकोट क्षेत्रको शैक्षिक बिकासमा उल्लेख्य भुमिका खेलेको भन्दै सम्मानित गरिसकेको छ । हालैमात्र ज्याङलाङ प्राबिको निर्माण सम्पन्न गरेका छन, जुन भुकम्प प्रतिरोधात्मक प्रबिधीमा तयार भएको छ । उनले रसुवा जिल्लाका बिभिन्न ठाँउहरुमा बिभिन्न स्कुलहरुलाई डेन्टल क्याम्प समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन । यसका साथै स्वास्थ्य शिबिर, आवश्यक शैक्षिक सामाग्री समेत प्रदान गर्दै आएका छन । अहिले पर्यटन क्षेत्रमा सबैका बलरामको रुपमा स्थापित छन । भन्छन,‘ समाजसेवा यात्राको २० बर्षे अवधिमा मैले थाकेर कहिल्यै बस्नु परेन ।’जिबनमा अब धेरै धनोपार्जन भन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वपुर्ण जिबन जिउने क्रममा छु उनी यसै भन्दै थिए ।